သင်တို့မသိသေးတဲ့ ရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်ဆုံး အချိန် …! - APANNPYAY
Home / ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ / သင်တို့မသိသေးတဲ့ ရေ (လုံးဝ) မသောက်သင့်ဆုံး အချိန် …!
Apann Pyay 9:31 AM ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ Edit
ဘယ်အချိန်များ က ရေသောက်ရန် အသင့်တော်ဆုံး အချိန်များဖြစ်ပါသလဲ
ရေခဲရေ နဲ့ ရေနွေးတွေကို မဆိုလိုပါ။ (ရိုးရိုးသောက် ရေသန့် ကိုသာ သောက်ပါ)
ရေ (လုံးဝ) မသောက် သင့်ဆုံး အချိန်က ဘယ် အချိန် ဖြစ်ပါသလဲ..
အမေရိကန် ကျန်းမာရေး သုတေသီတွေ ရဲ့စစ်တမ်းများ အ ရ ကမ္ဘာပေါ် မှာ တရုတ် နဲ့ ဂျပန် လူ မျိုးတွေ မှာ အူ ကင်ဆာရောဂါ ဖိစီးခံရမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ကြပါတယ် တဲ့။
ထမငျး အသကျ ခုနဈရကျ၊ ရေ အသကျ တဈ မနကျ ဆိုတဲ့ ရှေးစကား ရှိပါတယျ။
လူသားတှေ အတှကျ ရေ က ဘာ့ကွောငျ့ မရှိမဖွဈ လိုအပျ ပါသလဲ……
ဘယျအခြိနျမြား က ရသေောကျရနျ အသငျ့တျောဆုံး အခြိနျမြားဖွဈပါသလဲ
ရခေဲရေ နဲ့ ရနှေေးတှကေို မဆိုလိုပါ။ (ရိုးရိုးသောကျ ရသေနျ့ ကိုသာ သောကျပါ)
ရေ (လုံးဝ) မသောကျ သငျ့ဆုံး အခြိနျက ဘယျ အခြိနျ ဖွဈပါသလဲ..
အမရေိကနျ ကနျြးမာရေး သုတသေီတှေ ရဲ့စဈတမျးမြား အ ရ ကမ်ဘာပျေါ မှာ တရုတျ နဲ့ ဂပြနျ လူ မြိုးတှေ မှာ အူ ကငျဆာရောဂါ ဖိစီးခံရမှု အနညျးဆုံးဖွဈကွပါတယျ တဲ့။